Kisarisary Amin’ny Aterineto Maneho Ny Satan’ny Vehivavy Ao Shina Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Marsa 2015 15:58 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, فارسی, Français, English
Kisarisarin'ny Baidu sy Google tamin'ny 8 Martsa. Pikantsary CXQ.
«Hazonin'ny vehivavy ny atsasaky ny lanitra” hoy ny sary iray tamin'ny Revolisiona Komonista Shina tamin'ny taona 1949, mankalaza ny fanafahana ny vehivavy tamin'ny rafitra feodaly. Ary ahoana no fomba ikarakarana ny vehivavy ao Shina ankehitriny? Sarotra ny hamaly tsy hitanila, saingy ny fijerena ny kisarisary ao amin'ny Baidu [milina fikarohana goavana indrindra amin'ny aterineto ao amin'ny firenena] momba ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ny 8 Marsa no manome famantarana sasantsasany: saribakoly ao anatin'ny vata mozika.
Nifangarika tamin'ny kisarisarin'ny [Doodle] Google tamin'ny Andron'ny Vehivavy ny kisaritsarin'ny Baidu. Bilaogera Shinoa malaza iray, miantso ny tenany ho “Pretending in New York (mihevi-tena fa any New York),” niresaka izany fahasamihafana izany :
Tsorina, tsy dia mamirapiratra ny kisarisarin'ny Google, fa mety ara-politika. Saingy tena sarobidy ity fahamarinana ara-politika mahazatra ity raha oharina amin'ny kisarisarin'ny Baidu.
Nanasongadina ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny Weibo sy WeChat tamina lahatsoratra bilaogy iray ihany koa izy, manazava ny antony iheverany fa mety mampiasa ny fahitsiana ara-politika bebe kokoa i Shina :
Mora tokoa ny hilaza hoe iza no tsara kokoa.
Amin'ny kisarisarin'ny Baidu, tovovavy marefo sy mahafatifaty ny vehivavy ary mila arovana.
Amin'ny kisarisarin'ny Google, maneho fanajana ny vehivavy manana andraikitra, taona ary fomba fiainana samihafa.
Saribakoly ao anaty boaty tsara tarehy ny kisarisarin'ny Baidu, tsy olombelona akory aza izany.
@anonymous user (mpisera tsy mitonona anarana)
Nanampy sary masina mampihetsi-po ho an'ny olona manana fitiavan-doko samihafa sy fironana ara-nofo isan-karazany ao anatin'ny rafitrany ny Apple; Mankalaza ny fetibe miaraka amin'ny vehivavy manana andraikitra sy taona samihafa kosa ny Google; ary mametraka ny tovovavy ao anaty boaty kosa ny Baidu. Mila mijanona ho mahafatifaty, manambady, miteraka sy hojeren'ny hafa fotsiny izy.
Misy ireo orinasa Aterineto tena tratra aoriana amin'ny fomba fijeriny ny lahy sy ny vavy. Izany no mahatonga ny fanehoan'izy ireo ny lahy sy ny vavy ho feno ny fitsarana an-tendron'ny fiarahamonina anjakazakan'ny lahy (patriarika). Misy mihitsy aza ny sasany manambany ny vehivavy amin'ny fanaronana azy ao anaty sary babangoana ary jeren'ny lehilahy ho fanjifany. […] tsy raharahiana ny maha-vehivavy ny vehivavy. Mazava loatra, manao izany ry zareo hanomezana fahafaham-po ny filànan'ny varotra antserasera sy ny fanjifana amin'ny andro fety.
Nahoana no mahatsiaro tafintohina aho amin'ny maha-vehivavy ahy? Satria tsy te-ho “andriambavy” aho.Tsy liana amin'ny boaty mozika, firavaka na kilalao aho. Fa te ho vehivavy olo-tsotra mahaleotena fotsiny. […] Tsy vao sambany ny Baidu no nanevateva ahy. Mbola tsaroako aho nampiasa ny habaka indray mandeha, fony aho mbola kely teny amin'ny lisea. Rehefa manendry ny teny hoe “ahoana no fomba” ao amin'ny milina fikarohana aho, ny sosokevitra tohiny miseho ho azy avy hatrany dia hoe “ahoana no fomba fiterahana”, mba fantatrao ve fa misy fiantraikany amin'ny ankizivavy 13 na 14 taona izany? Nahatsiaro nangoritsina kivy ratsy aho.
Ny andro Iraisam-pirenena hoan'ny vehivavy dia mba hilazana amin'izao tontolo izao fa nateraka mba hitovy ny olon-drehetra, fa tsy hoe mila fiahiana (ara-bola) manokana ny vehivavy. Mampiseho ny fomba famaritan'ny fiarahamonina Shinoa ny vehivavy ho toy ny “kilalao” ny Baidu. Ankehitriny, mbola enta-mavesatra hoan'ny lehilahy izany famaritana izany. [Manamafy ny fandresen-dahatra efa ao anaty izany] tahaka ny hevitra hoe tsy maintsy mandohalika ary milelaka ny andriamanibaviny ny “Diaosi [mahantra, lehilahy tsy dia tsara tarehy],” ary ny lehilahy tsara indrindra, ny manja indrindra sy ny manankarena indrindra ihany no tian'ny andriamanibavy”. Manafaka ny lehilahy ihany koa ny fanafahana ny vehivavy.
Nanasongadina ny zava-iainana ao amin'ny toeram-piasan'i @LinaliHuang, izay nozarainy tao amin'ny Wechat i “Pretending in New York” [milaza tena ho any New York] :
Niasa niaraka tamina orinasa goavan'ny aterineto miresaka sary lohahevitra andron'ny vehivavy. Ahitana vehivavy manana haben'ny vatana samihafa amin'ny asa samihafa ny sary. Nankafy ny fanaovana izany ny ekipa ary faly tokoa tamin'ny vokatra. Ny fanazavan-tsary dia hoe “Mijoroa amin'ny maha-anao anao.” Vehivavy avokoa ny ankamaroan'ireo mpikambana ary nisosa tsara ny zava-drehetra tany am-boalohany. Saingy nolavin'ny patirao ny hevitra ary novaina ho vehivavy kely manangona ravindite ao anjaridaina. Milaza ny fanazavana an-tsary hoe: “Mendrika fiahiana manokana ianao.” Nahita ny Google aho androany, ary mahatsiaro malahelo.